‘परिश्रान्त पृथिवी’ : जनमानसमा वातावरण संरक्षणप्रतिकाे चासो बढाउने पुस्तक | साहित्यपोस्ट
‘परिश्रान्त पृथिवी’ : जनमानसमा वातावरण संरक्षणप्रतिकाे चासो बढाउने पुस्तक
डा. गोविन्दराज भट्टराई प्रकाशित १८ असार २०७८ १९:११
अघिल्ला दशकमा उत्तरपूर्वी भारतका पाँच यात्रा गरेँछु। तिनैमध्ये एकमा श्री मुक्ति बरालसितको लामो यात्रामा देवेन सापकोटालाई भेटेको सम्झिन्छु। उनी पशुस्वास्थ्य विज्ञानमा निष्नात, शिक्षाको व्यवस्थापन र अध्ययनमा समर्पित व्यक्ति रहेछन्। त्यस अतिरिक्त साहित्यमा पनि समर्पित।
आफू पर्यावरणीय विश्वस्थितिबारे सचेत भई त्यसै क्षेत्रका नेपाली कविताको सिर्जनामा पनि समर्पित भएको कुरा गरेका थिए। नभन्दै गतवर्ष ५-६ जुनका दिन बेलायत केन्द्रबाट आयोजित वातावरण दिवस मनाउने क्रममा उनको रचना श्रवण गर्ने अवसर मिल्यो। सो सिर्जना बेलायतको अमूल्य प्रकाशनको स्वच्छन्द सुसेली-२ मा प्रकाशित छ। यसमा पर्यावरण सिक्रीको महत्त्वलाई बुझाउन ८२ थान कविता समावेश गरिएका छन्। धन्य छ एक नवीनतम् चेतना आन्दोलनका अभियन्ता विजय हितानलाई।
दोस्रो ग्रन्थ १४ वर्षअघिको उत्तरआधुनिक विमर्श (वि.सं. २०६४) मा एउटा नवीन खण्डै थपियो- इको साहित्य/परिवृत्तीय सिर्जना र मूल्याङ्कन। विस्तारै यो नेपाली समालोचना जगत् यसको उपस्थितिबारे सचेत हुन लाग्यो; र आज त यस विषयमा विद्यावारिधि भइसके। सो विषयक प्रथम शोधको निर्देशक बन्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। केही ग्रन्थाकारमा आएका प्रकाशन पनि तर पूर्वोत्तर भारतको भनौँ भारतीय नेपाली समालोचना अन्तर्गत यस विषयमा लेखिएका पचास जति लेख उपलब्ध छन्। कृतिको सङ्ख्या पनि एक दर्जन पुगेको छ। ‘परिश्रान्त पृथिवी’ चाहिँ सिर्जनात्मक क्षेत्रको भारतीय नेपाली साहित्यको प्रथम सङ्कलन हो। एकचालीस कविताले बनेको यस ग्रन्थमा परिवृत्तीय चेतनाका विषयवस्तु अत्यन्तै व्यापक र विविध रूपले प्रस्तुत छन्।
पृथ्वीमातालाई विद्रूपतातिर धकेल्ने प्रथम शक्ति विज्ञान र प्रविधि हो, हामीलाई चाहिएको सजिलो छोटो बाटो जसमा उभिएर लोभ्याउने कुरा छन् – जादूगरीजस्ता आविष्कार अनि हाम्रा कृत्रिम सफलता। हाम्रा सबै कर्म मिलेर पृथ्वीलाई उनका अस्तित्व निर्माता पञ्चमहाभूतलाई सहज वश्य बनायौँ; आज त्यस कर्मकै दुष्परिणाम भोग्दै छौँ। देवेन सापकोटाले ती प्रत्येक तत्त्वको हजारौँ वर्षको जीवन-चक्र उल्टापल्टी गर्ने हाम्रा स्वार्थी कर्मलाई सुन्दर कविताद्वारा बुझाएका छन्।
अरूजस्ता होइन रहेछन् देवेन। स्वयम् विज्ञान र प्रविधिको परिवर्तनकारी जगतको उनी अन्तर्तहका अध्येता रहेछन्। त्यही क्षेत्र नै उनको विज्ञताको र साधनाको क्षेत्र रहेछ। उनी पशुविज्ञानका क्षेत्रका अध्येता/अनुशन्धाता भएकाले ती कविताका विषयवस्तुभित्र उनी अनुभव र चेतनाले बोल्दैछन् त्यसमा थपिएको शक्ति केवल कविको भावनात्मक पक्ष हो।
त्यसो त अन्धो छ विज्ञान, यो रोकिने छैन। त्यसो त अन्धो छ मानवको स्वार्थीवृत्ति त्यो पनि घट्ने छैन। ध्वंसतिर प्रवृत्त छन् ती; भरे के होला भन्ने चिन्ता छैन। स्वर्गलोक छोडेर तल ओर्लेको मान्छे फेरि त्यहाँ फर्किन चाहन्छ, तर त्यो सम्भव छैन। अङ्ग्रेजी कवि विलियम ब्लेकले ‘निर्दोषिता’ र ‘अनुभूति’ दुई पक्षका कवितामा बताएझैँ एकपल्ट अनुभव गाँसिएको मान्छे निर्दोषितामा फर्किन सक्तैन।
तथापि हामीले गल्ती गरेछौँ भन्ने बोध हुनु वा गराउनु पनि ठुलो कुरा हो। ठुलो उपलब्धी हो। देवेनको प्रधान लक्ष नै ‘पृथ्वीवाद’ हो। त्यसभित्र सृष्टिभित्रका सारा तत्त्व आउँछन् पहिलो कवितामा त्यो छ। ‘सेभ दी अर्थ’ भन्ने ता विश्वकै एक अभियान छ; प्रत्येक सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वमाथि, तिनीहरूमाथि परेको दुष्प्रभाव र तिनले उत्पन्न गरेको दुष्परिणाममाथि हामी सचेत हुनु नै आजको प्रथम कर्तव्य हो। पृथ्वीले वहन गरेका असह्य कष्टको बोध गर्दै सङ्ग्रह यसरी सुरु गर्छन्-
डा. वीरेन्द्र केसी ४ असार २०७८ १२:५२
नाति र बाजेका संवाद कति कवितामा आउँछन्, अबोध बाजेलाई वैज्ञानिक यथार्थ सम्झाउन नाति सामथ्र्यवान छ। तर यसो गर्दा कति कवितामा सहज संवेद्यता अलिक छायाँमा पर्दछ किन कि त्यहाँ संवादात्मक शैलीले स्थान पाउँछ। एक ठाउँमा बारीमा गँड्यौला निख्रेपछि गँड्यौलाको महत्त्व र आवश्यकता बोध हुन्छ।
कवितामा कीट पतङ्गदेखि बिराला, गिद्ध, वन्य पशु-पक्षी, पुतली चिडियाखानाका सबै सबै पात्र छन्, विषय छन्। वास्तवमा सबै मिलेर जीवनचक्र निर्मित छ। यस्तै एक कवितामा ‘बिचरा बुढो नदी’ एक पात्र छ परित्यक्त गाउँको कुवाझैँ। यसमा पनि संवादात्मक शैलीमै बाढी र भू-कटाउको कुरा उठाइएको छ।
सानो कुरा छ टिस्यू पेपर प्रयोगको तर यसले हानिको अस्त्र शृङ्खला बोकेको हुन्छ – हाम्रा अतीतका अभ्यास सरल र हानिरहित थिए। बाढीको प्रकोप पनि मानवकै अकर्मका परिणाम हुन्। ‘गाउँले मन’ कवितामा स्रष्टाको मन नोस्टाल्जिक भएर गाउँको अतीतमा विचरण गर्दछ; ती दिनमा प्रकृति निर्भय रूपले विचरण गर्थिन्, आज ती उच्छेदनमा परेकी छिन्। त्यसैले वन्य पशुप्राणीले पनि जुलुस निकाल्छन्, विद्रोह गर्छन्।
विज्ञानभित्र यसरी साहित्य रचिन्छ साहित्य नव सिद्धान्तसँग जोडिन्छ, जोड्नु पर्छ, साहित्य जीवनसँग जोडिन्छ, जोड्नुपर्छ; साहित्य पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्रको स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ, जोड्नुपर्छ। नजोडेरै हामी ग्रह-नक्षत्र बिरामी पार्दैछौँ आफ्नै काल निम्त्याउछौँ। तीमध्ये एउटा काल हो हालको कोरोना।
कला कमबेसी भएपनि विषयवस्तुमा यी कविताले ल्याएको विविधता प्रशंसनीय छ। विषयज्ञान नभएको व्यक्तिले यति सक्तैन, जान्दैन। मलाई देवेनको सूक्ष्म चेतना विजय हितानको प्रकाशोन्मुख कथासङ्ग्रह ‘ब्लू-प्लानेट’ भित्रका १८ वटा कथाको विविधता जस्तै लाग्यो। देवेनको कलम त्यसैगरी निरन्तर चलिरहोस्। यो एक आयाम परिवर्तनतर्फको महान् यात्रा हो।
(परिश्रान्त पृथिवीमा सङ्ग्रहित डा. गोविन्दराज भट्टराईले लेख्नुभएकाे भूमिका)
डा. गोविन्दराज भट्टराईपरिश्रान्त पृथिवीपर्यावरण साहित्य
कारागार साहित्य; अङ्क १४